Xisbiga KULMIYE oo Agab Ciyaareed uu wareejiyey kooxaha ka qayb gelaya tartanka kubbadda Cagta ee ka socda garoonka Dhurqaanta | KULMIYE
Xisbiga KULMIYE oo Agab Ciyaareed uu wareejiyey kooxaha ka qayb gelaya tartanka kubbadda Cagta ee ka socda garoonka Dhurqaanta
Hargeysa 18/06/2017 (Warbaahinta Xisbiga KULMIYE)-Hoggaanka xisbiga talada Somaliland haya ee KULMIYE u qaabilsan degmada Ibraahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa, ayaa agab ciyaareed xisbigu ugu talo galay tartanka kubadda cagta bisha Barakaysan ee Ramadaan ee kasocda Garoonka Dhurqaanta ku wareejiyey maamulka tartankaas gacanta ku haya.
Agabkan oo ka kooban Kubbado, Billado, koobab iyo Diraysyo, ayaa qayb ka ahaa agabo uu xisbigu ugu talo galay dhammaanba tartamada bisha Ramadaan ka socda garoomada waddanka oo dhan, waxana wareejintiisa oo maanta dhacday ka qaybgalay masuuliyiinta xisbiga KULMIYE ee degmada Ibraahim Koodbuur oo uu hormuud u yahay guddoomiye Khadar Ibraahim Dugsiiye,Xoghayaha Demgada Md. Maxamed Abiib Cismaan(Siikaawi) iyo Madaxa Abaabulka ee degmada Ibraahim Koodbuur Marwo Yaasmiin Maxamuud.
Hadallo kooban oo ay masuuliyiintani goobta ka jeediyeen, ayey kaga warbixiyeen sida uu xisbiga KULMIYE diyaarka ugu yahay inuu is garab taago da’yarta waddanka guud ahaan, isla markaana uu muhiimadda gaarka ah u siiyey inuu farxadooda ka qayb qaato bisha barakaysan ee Ramadaanta.
Xubnahani waxa ay caddeeyeen inuu hoggaanka KULMIYE xil weyn iska saaray dhiirrigelinta da’yarta ku hawllan mihnadda kubadda cagta, iyaga oo farta ku fiiqay inuu guddoomiyaha xisbiga KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi muujiyey taageeradiisa la xidhiidha dhallinyarada waddanka.
Maamulka garoonka kubadda cagta ee Dhurqaanta oo iyaguna goobta hadallo kooban ka jeediyey ka hor intii aanay agabkan la wareegin, ayaa si weyn uga mahadnaqay deeqda ka timi xisbiga KULMIYE ee la gaadhsiiyey iyo sida uu hoggaanka xisbigu uga qayb qaatay maamuuska da’yarta dalka oo iyagu ah mustaqbalkii berri.
Ugu dambayntii waxa ay maamulka Degmada Ibraahim Koodbuur halkaas ku guddoonsiiyeen maamulka garoonka dhurqaanta oo uu ka socdo wareegga bisha Barakaysan ee Ramadaantu agab dhammaystiran oo uu xisbigu ugu talo galay, kaas oo loo qoondeeyey kooxaha tartankaas ka qaybgelaya.